अष्ट्रेलियाबाटै 'बुवा' र 'चेली'लाई मीठो केकको सरप्राइज कोसेली ! - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाबाटै ‘बुवा’ र ‘चेली’लाई मीठो केकको सरप्राइज कोसेली !
Posted by Himalayan Kangaroo | ६ भाद्र २०७३, सोमबार ०२:५४ |
मेलबर्न । बुवाको मुख हेर्ने दिन नजिक आउँदैछ । आफूलाई पढाइ,हुर्काइ आज यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँने ती बाबु आमा साँच्चिकै देवता समान हुन् । तर अहिले तपाई अष्ट्रेलिया वा कुनै विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ र यसपटक बाबुसँगै बसेर उहाँको मुख हेर्न पाइएन,उहाँको आशीर्वाद लिने मौका छुट्ने भो भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ?
यदि त्यसो हो भने यसपटक बाबुलाई यही विदेशबाटै किन विस नगर्ने ? उहाँलाई सरप्राइज दिएर किन खुशी नपार्ने ? तर कसरी ? तपाई जस्तै धेरैका यस्तै द्धिविधाहरुमा साथ दिनका लागि केक टु नेपालले आफ्नो सेवा शुरु गरेको हो । यही केक टु नेपालले नजिकिदै गरेको बाबुको मुख हेर्ने दिन र महिलाहरुको महान पर्व तीजको अवसर पारेर अझ विशेष प्याकेज समेत ल्याएको छ ।
केक टु सेवाबाट सेवा लिनका लागि मात्र तपाईले आफ्नो साथी वा आफन्तको नाम अनि टेलिफोन नम्बर सहितको ठेगाना उपलब्ध गराउँनुपर्नेछ । साथमा कुन आकार,डिजाइन,तौल र फ्लेभरको केक डेलिभर गर्ने हो,त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउँनुपर्नेछ ।
तपाईले अर्डर गर्नुभएको २४ घण्टाभित्र तपाईको शुभकामना,माया,प्रेम र सद्भावसहितको मीठो केक केक टु नेपालले तपाईले भनेकै ठेगानामा डेलिभरी गरिदिनेछ ।
केक टु नेपालको सेवा नेपालको काठमाडौं,चितवन,धरान,पोखरा,बुटवल र नेपालगञ्ज लगायतका प्रमुख शहरहरुमा उपलब्ध छ ।
यस्तै तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ र अष्ट्रेलिया,युके लगायतका देशमा रहेका आफ्ना आफन्त वा साथीभाइलाई सरप्राइज केक पठाउँन चाहनुहुन्छ भने पनि यो सेवा उपलब्ध छ ।
Previousअष्ट्रेलियाको मेलबर्न डबलीमा यसपटक बालप्रतिभा र गाईजात्राको पालो
Nextकाठमाडौंमा इन्धन सहज हुन अझै दुई तीन दिन लाग्ने
२० पुष २०७३, बुधबार १५:१५
यी हुन् पढाइपछि अष्ट्रेलियाको पीआर तुरन्तै पाइने ५ विषयहरु
१ पुष २०७३, शुक्रबार ०४:२३
अष्ट्रेलियामा नदीमा डुबेर अमित राईको निधन
१२ माघ २०७४, शुक्रबार ०३:३१
९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०१:४४
रवि लामिछानेलाई अझै ५ दिन थुनामा राख्न आदेश
अष्ट्रेलियाको वुलवर्थमा बुधबार देखि लाग्दैछ ठूलो सेल, ५० प्रतिशतसम्म छुट
अष्ट्रेलियामा एयरपोर्टका कामदारहरुद्वारा बुधबार आन्दोलनको घोषणा
सिंहदरबारभित्रै मृत भेटिएका नायब सुब्बाको सुसाइड नोट भेटियो
अष्ट्रेलियाको ला ट्रोब युनिभर्सिटी : कलेज, कोर्स तथा छात्रवृत्ति